Lalana Ambatonakanga-Ambohijatovo : very ny vola nomena izay nanao izany teo aloha | NewsMada
Lalana Ambatonakanga-Ambohijatovo : very ny vola nomena izay nanao izany teo aloha
Vao tamin’ny volana oktobra, novambra 2015 lasa teo, namboarina ny lalana pavé midina avy any Ambatonakanga mihazo eo Ambohijatovo. Ankehitriny anefa, simba sahady io lalana io, very fotsiny ny vola nomena izay orinasa nanao izany teo aloha. Ny kaominina Antananarivo Renivohitra indray ankehitriny no voatery mandray an-tanana ny fanamboarana azy, famerenana ireo pavé ireo.
Araka ny fanazavana nentin’ny mpiasa iray ao amin’ny kaominina manao ny fikojakojana eny an-toerana, tsy voafehin’izay nanao izany asa izany mihitsy ny famerenana ny pavé, tsy misy dikany ilay “ceinture” natao tsy hampikorontana ireo vato ireo. “Tsy fantatra koa, hoy ireo mpiasa teny an-toerana ihany, izay fifanarahana natao momba ity asa ity sy ireo tompon’andraikitra nanao sonia momba izany. Nirahina fotsiny izahay hamerina azy”.
Mazava loatra amin’ny asa lehibe tahaka izao, mbola tokony hiantohan’izay nanao azy ny fikojakojana mandritra ny fotoana voafetra ary tokony ho voasoratra mazava tsara ao anatin’ny bokin’andraikitra izany. Aiza izao ny fanajana izany lalàna izany ? Fehiny, very fotsiny ny volam-bahoaka, matiantoka ny rehetra.